Dead Cells dia ode natao ho an'ny lalao miaraka amin'ny roguelike ambony | Androidsis
[VIDEO] Maty sela dia roguelike izay manondraka zavakanto isaky ny pixel, ny lalao Androidsis tsara indrindra tamin'ny Novambra
Efa am-bolana maro izahay no nilalao Dead Cells ary nitady ny fotoana mety hiantsoana azy io ho lalao Androidsis tsara indrindra amin'ny volana. Roguelike miavaka izay nandao antsika, ary manohy mandao antsika, miaraka am-bava malalaka noho ny teknika, kalitaon'ny fahitana ary ny filalaovana lalao.
Vitsy ny lalao any ankehitriny toy ny Maty sela ahafahanao milalao ora maro ary mbola be ny sisa tavela mahita Lalao izay miavaka amin'ny hetsika haingana vitany amin'ny alàlan'ny lampihazo sy ny fihetsiny miaraka amin'ny fitaovam-piadiana marobe izay tsy maintsy fantarintsika ny fomba fikirakirana mba hahazoana ny fahafahan'izy ireo feno. Lalao hat-off izay mitana ny laharana telo voalohany amin'ny taona.
1 Mahagaga amin'ny zavatra rehetra
2 Fampiterahana tsy tapaka ny lalao tsirairay ao amin'ny Dead Cells
3 Amin'ny Espaniôla ary miaraka amin'ny fanitarana ho avy
Mahagaga amin'ny zavatra rehetra
Ny Dead Cells dia lalao iray izay mamoaka kalitao amin'ny lafiny rehetra. Ny zavatra voalohany jerena dia ny haavon'ny antsipiriany amin'ny ambaratonga hita maso sy ara-teknika ary avy eo dia mifanena amin'ny fihetsiketsehana manelingelina izay mitondra antsika amin'ny tontolo samihafa napetraka.
Esa ny hetsika dia midika hoe mitsambikina, miaro ary manafika fahavalo amin'ny fotoana mety indrindra ary mampiasa fitaovam-piadiana isan-karazany izay mamela ny farany amin'ny traikefa ady vokariny. Tsy mijanona amin'ny ady fotsiny izy io, fa koa amin'ny fihetsika ataontsika, ny fianjerantsika na ny fitsambikantsika hahazoana ny fahavalo.
avy eo ny fahasamihafana lehibe an'ny fahavalo dia mijanona, ny tsirairay miaraka amin'ny mekanika manokana ary hataon'izy ireo sarotra be amintsika ny zavatra miankina amin'ny fitaovam-piadiana entintsika; Manomboka amin'ny sabatra ra ka hatrany amin'ny karavasy mandeha amin'ny herinaratra izay hamela ny squires hahagaga. Ny zava-drehetra ao amin'ny Dead Cells dia noforonina mba handrenesana ireo hira tsara indrindra.
Fampiterahana tsy tapaka ny lalao tsirairay ao amin'ny Dead Cells
Izany no fiheverana voalohany raisin'ny olona iray ary mitarika antsika hieritreritra mivantana raha mihelina io kalitao io na hanana votoaty hilalao mandritra ny ora maro sy ora maro isika. Eto no hihaonantsika amin'ireo zava-nisongadinan'ny Dead Cells, satria isaky ny maty isika, toy ny roguelike tsara, dia hanomboka ny lalao isika ka ny haavony dia namboarina indray tamin'ny alàlan'ny andalana izay tsy maintsy iainantsika.
Ary iray taranaka sendra mampatsiahy ny Diablo 2 lehibe noho ny fifangaroany tsara. Avia, toa misy olona mamolavola ireo lampihazo rehetra, toerana, andinin-tsoratra miafina, zavatra misy ny lahatsoratr'izy ireo sy ny anjara asany ary ambaratonga be dia be amin'ny tanana.
Ny Dead Cells dia lalao mandritra ny lalao mandritra ny ora maro sy ora maro. Manampy fa isika dia afaka mampifandray amin'ilay mpilalao ny andiana orb izay mamela antsika hanana fahaiza-manao vaovao na amin'ny fotoana hanombohana ny lalao, ireo fitaovam-piadiana telo ananantsika tsy mitongilana dia manana kalitao tsara kokoa, manampy traikefa lalao iray manontolo izay manasa antsika hahita isaky ny manomboka.
Amin'ny Espaniôla ary miaraka amin'ny fanitarana ho avy
Izahay dia efa nametraka ny Dead Cells amin'ity lisitr'ireo lalao roguelike tsara indrindra ity ary efa niresaka momba ny fanitarana vaovao voarainy iray volana lasa izay. Misy roa hafa ho avy ary ny lalao dia avy amin'ny PCHanana olon-kafa vitsivitsy izy io, satria efa nanambara andro lasa izay ny iray vaovao manana fitaovam-piadiana bebe kokoa.
Biby volontany ho an'ny finday izay, mazava ho azy, premium, ary amin'izany raha tianao ny asan'ny sabatra, zana-tsipìka, ampinga ary majika, dia hankafy toy ny dwarf ianao amin'ny fitaovam-piadiana rehetra anananao; ary rehefa manokatra bebe kokoa isika, ny effets tsara kokoa sy ireo piksel ireo dia "hatsembohana zavakanto" hamela antsika tsy hiteny intsony.
Un Lalao tsy manam-paharoa antsoina hoe Dead Cells ary navoakan'i Playdigious izay mampiseho fa afaka manao ambaratonga be dia be ianao, manome atiny izay lasa fotoana milalao ora sy ora maro, ary mitondra feon-kira mampihetsi-po miaraka amin'ny effets feo izay manery antsika hampiasa headphones tsara hivoahana fotsiny. Ary hiala sasatra ianao, manome toky anao izahay.
Lalao mampientam-po ary alainay any amin'ny mpamorona azy ny satrokay. Tsy manana teny izahay hanambarana ny zavatra tsapany amin'ny lalao hetsika izay hanana taona maro apetraka amin'ny findainao ary ny toerana misy, ody, fiaviana ary tontolo misy epika ary ireo fahavalo voavolavola mamirapiratra na boss farany, dia mitondra antsika amin'ny iray amin'ireo traikefa filokana tsara indrindra avy amin'ny finday.
Epika ny feon-kira
Ny fiaviany sy ny tantara izay ho fantatsika amin'ny antsipiriany
Fotoana tsy ampoizina namboarina izay mampiavaka ny lalao tsirairay
Ny atmosfera noforonina, ny tontolo iainana ary ny majika noforonina dia ambony
Ny fitaovam-piadiana rehetra amin'ny lalao dia samy manana ny azy avy
Tsy mora ny sefo farany
Ny fihetsiky ny toetra amam-panahy sy ny sarimiaina dia mavitrika, mailaka ary tsara tantana
Votoatiny maro sy gameplay mandritra ny ora maro
Vaovao farany ho avy
Aleo lalaovina amin'ny mpanara-maso indrindra, indrindra amin'ny fotoana izay midina amin'ny alalan'ny lianas isika ary mila mamindra azy ireo avy eo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » [VIDEO] Maty sela dia roguelike izay manondraka zavakanto isaky ny pixel, ny lalao Androidsis tsara indrindra tamin'ny Novambra
Ny tolotra tsara indrindra amin'ny faran'ny herinandro zoma mainty